Ukulungiselela nokudibanisa i risotto - yile ndlela i-risotto yakho iphumelela ngayo
Yintoni enokudibaniswa ekulungiseleleni i risotto?
Impazamo yokuphepha xa ulungiselela risotto
Abantu abaninzi banqwenela ukuzama izitya ezintsha ngokuphindaphindiweyo ukuze bavelise iindlela ezahlukahlukeneyo zokutya. Isitya esithandwa kakhulu kwiikhikhini ezininzi ezizimeleyo kunye nakwiindawo zokutya, nguHototto. Isitya selayisi mhlawumbi sidume kakhulu ngenxa yokuba unokuyitshintsha kakuhle kwaye uyisiphunga kunye nazo zonke izithako.
Yintoni na i risotto?
I-Risotto ivela kumpuma kwe-Itali kunye nesitya selayisi. I-risotto enhle imnandi kakhulu, kodwa ukuhambelana kwerayisi kusekhona "alente".
I-risotto yemveli ngamakhowe, imifuno entsha kunye neParmesan
Ukulungiselela okusemgangathweni kuyinto elula: Nantsi, irayisi engahlambulukanga ihamba nge-anyanisi kunye ne-bhotela encinane okanye ioli kunye nokupheka emthonjeni kude kubekho isidlo sinomdla okwaneleyo.
Enyanisweni, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuze ubone ukuba yeyiphi irayisi esetyenziswayo. Azikho zonke iindidi zerayisi ezifanelekileyo ezi lungiselele ukulungiswa kwelayisi. I-rice ye-nafsi ephakathi ihlala isetyenziswa, njengoko ikhupha isitoksi esaneleyo, ejongene nokubunjwa kwe-creamy.
Ngakolunye uhlangothi, i-Rice pudding, ayifanelekanga, njengoko ipheka ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwaye ekugqibeleni ayinamandla ngokwaneleyo kwesi sidlo. I-Risotto inokuthi ikhonjiswe njengenqanaba eliphambili okanye ngokuhambelana nezitya ezininzi zeenyama.
I-Risotto ingalungiselelwa ngeendlela ezahlukeneyo. Izithako ezisisiseko kwisitya selayisi ziyi-rice ejikelezayo, i-anyanisi, ioli kunye nabani na abafuna ukuthatha iwayini encinane ngaphezu kwamanzi. Eminye impela inkalo yongcamango, kuba unokunikela malunga nazo zonke izithako kwi risotto.
Umlilo weCampfire kwaye udibanise izonka zokupheka
Eyona nto ithandwa kakhulu yiParmesan Risotto. Ngenxa yale njongo, isidlo silungiselelwe njengoko kuchaziwe ngasentla. Ngokukhawuleza ukuba irayisi iphekwe kwaye yonke into i-mushy, engeza ibhotela kunye neParmesan kwilayisi. Usuvele udibanise i risotto enqwenelekayo yeParmesan.
Nokuba i-risotto yama-mushroom ikhethwa ngokuqhelekileyo njengekhosi eliphambili okanye i-dish dish. Apha nilungiselela yonke into ngokucwangcisa kunye nokukhupha ama-mushroom ngee-anyanisi kwipani elongezelelweyo. Emva koko unika konke phantsi kobunzima. I-Parmesan kunye nee-mushroom nazo zingadibaniswa, nto leyo ixhomekeke kwintetho yakho.
Enye yezona mpazamo ezinkulu kwixesha elilungiselelwe kukuba irayisi iphekwe ngokude kakhulu. Oku kwenza ukuba ubunzima bube buthambile. Nangona kunjalo, irayisi kufuneka iqhubeke "i-dente" ukuze ivelise iphunga layo elipheleleyo kunye nengcamango yezinye izithako.
I risotto irayisi akufanele ihlambulwe ngaphambili, kungenjalo iya kulahlekelwa ngamandla ayo kwaye isitya sonke asiyi kusebenza. Ukongeza, akufanele uhlale kude nesitofu eside, kuba irayisi ingatshisa ngokukhawuleza kwaye kufuneka uqhube phakathi phakathi.
Gcina ukutya ngokufanelekileyo | Ukutya nokusela
Ukunambitha njani iwayini ngokufanelekileyo?
Ukunakekelwa kwabantwana - Ukugqoka ngokufanelekileyo
Funda ngokuchanekileyo ukunyusa
Ukufunda ngokufanelekileyo - kuba ukufunda kuyamnandi
Funda ngokuchanekileyo ngengqondo yeMephu
Ukufunda kunanoma yiphina iminyaka
Ukufunda ngokufanelekileyo-ke wonke umntu unokufunda yonke into
Pheka nge thyme